रुन्चे गायक प्रकाश पौडेलको 'खुचिङ' सार्वजनिक (भिडियाे सहित )
बैशाख ६ , रुन्चे गायक प्रकाश पौडेलको (खुचिङ) बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियो युटुवमार्फत बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । युएईमा कार्यरत पत्रकार मेघराज सापकोटाका शब्द र पौडेलले स्वर र संगीत भरेको भिडियो माउण्ट एभरेष्ट इन्टरटेन्मेन्टको व्यानरमा निर्माण गरिएको हो । म्युजिक भिडियोमा कुशल विष्ट र सिसम राना लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ ...
कविता - आमा को हुन् ?
बैशाख ३ २०७५ रिता काफ्ले ।
रिता काफ्ले । आपार मायाको भण्डार हुन् आमा, मेरो सफलता र खुसीको छहारी हुन् आमा पहिलो पाठशाला र उर्जा को सोर्प्त हुन् आमा ।।। फेरिय यहाँ सबैको नजर आशा पनि हराउदै गयो शंघर्सा लाई झेल्न सिकाउने तेही काख प्यारो भयो ।। मेरो मनको कुरा भुझ्न सक्छिन मेरो नयनको इतिहास पढेर मलाई पत्थर झैँ अटल बनाउन खोजछिन् आफु मट्टी सरि गलेर ...
चलचित्र ‘हैरान’को शीर्ष गीत सार्वजनिक (भिडियो सहितं )
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘हैरान’को शीर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा शब्द र संगीत सत्यराज आचार्य र स्वरूपराज आचार्यको छ । स्वर सत्य/स्वरूपसँगै सरगम आचार्य र बबिता मानन्धरको छ । र्‍यापमा गिरिश खतिवडा छन् । राजन इशानले एरेन्ज गरेको गीतको भिडियोमा गम्भीर विष्टको कोरियोग्राफी छ । भिडियोमा सरोज खनाल, सत्यराज आचार्य, निर्मल शर्मा...
कविता - "सुभकामना "
चैत्र ३० २०७४ रिता काफ्ले
नव वर्ष २०७५ को शूभकामना नव वर्ष तथा वसन्त क्रतुको आगमनले मनमा शान्ति छाओस सपनाहरु साकार बनुन तपाईको जिवनमा नयाँ आयाम आओस ।। आत्मबल दृढ राखि समयलाई जित्न सक्ने इच्छाशक्ति बढोस सदकर्म गर्दै जाने तिम्रा कदमले सफलताको शिखर चढोस ।। निश्चल रहोस सबको चाहा , सकरात्मक सोचाई आओस दु खीलाई साथ मिलोस समृद्धि होस,देशम...
चर्चित लोक दोहोरि गायक बसन्त लम्सालको नया गित "दोहोरि सांझ मा आऊ है" सार्बजनिक
चर्चित लोक दोहोरि गायक बसन्त लम्साल र लक्ष्मी बस्नेतको स्वर मा रहेको नया गित "दोहोरि सांझ मा आऊ है" सार्बजनिक भयको छ । उक्त गीतमा बिष्णु भट्टराई को निर्देसं रहेको छ भने संगीत बसन्त लम्सालको नै रहेको छ । दृस्य निर्माण दरबार फिल्म्स प्र लि बुटवलले गरेको छ । "दोहोरि सांझ मा आऊ है" यस गीतमा चर्चित मोडल अलिना रायमाझी र बिजय खनालको आभिनाया रहे...
२०१८ को मिस नेपाल बनिन 'शृङखला खतिवडा'
काठमाडौं । मिस नेपाल २०१८ को ताज शृङखला खतिवडाले पहिरिएकी छन् । काठमाडौंमा भएको प्रतियोगितामा २४ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले मिस नेपाल २०१८ को ताज पहिरिएकी हुन् । हेटौंटा घर भएकी २२ वर्षकी खतिवडाले ताजसहित एकलाख रुपैयाँ नगद जितेकी छन् । त्यसैगरी काठमाडौंकी २२ वर्षीया रोनाली अमात्य मिस नेपाल इन्टरनेसनल, प्रिया सिग्देश मिस नेपाल अर्थ, ...
‘दबङ द टुर नेपाल’ अन्तर्गत तीन दिन बस्ने गरि जेठ १२ गते नेपाल आउदैछन सलमान खान
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम पुनः तय भएको छ । खानलाई अदालतले ५ वर्षको जेल सजाए तोकेपछि उनी नेपाल आउने कार्यक्रम अलपत्र परेको थियो । तर, उनी अदालतबाट जमानतमा रिहा भएपछि नेपालको कार्यक्रम पुनः तय भएको आयोजकले जनाएको छ । आयोजक ओडीसी इन्टरटेनमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङका अनुसार आगामी जेठ १२ गतेका लागि सलमा...
शनिबार जेलबाट रिहा भए सलमान खान
चैत्र २५, कृष्णसार (कालो हरिण) मारेको आरोपमा जेल गएका बलिउड अभिनेता सलमान खान शनिबार जेलबाट रिहा भएका छन् । सलमान मुम्बई पुग्ने बित्तिकै बलिउड अभिनेत्री कटरीना कैफ उनलाई भेट्न घरमै पुगेकी छिन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सलमान शनिबार राति सवा आठ बजे मुम्बईमा रहेको घर (ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट) पुगेका थिए । त्यसको एक घण्टापछि कटरीना स...
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानले बिहिवार जेलमा रात काटेका छन् । उनि धरौटिमा छुट्ने प्रकृयामा छन् । सलमान बिहिवारको रात निदाउन सकेकन् । जेल भित्र उनि कहिले उभिने त कहिले बसेर सोच्ने गर्दथिए । उनि ३.३० बजे मात्र विस्तारमा ढल्किएका थिए । साथै ८ बज्न साथ उनि उठे । जोधापुर जेलका एसपी विक्रम सिंहका अनुसार सलमान र असाराम बापुबीच रातमा कुराक...
सलमानलाई पाँच वर्षको कैद सजाय :बीस वर्ष आघिको यस्तो कारण
चैत्र २२, बीस वर्ष पुरानो कालो हरिण शिकार मुद्दामा जोधपुरको चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट कोर्टले सलमान खानलाई दोषी ठहर्‍याएको छ । सलमानलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ भने १० हजार भारु जरिवाना लगाइएको छ । यो मुद्दामा अन्य आरोपित सैफ अली खान, तब्बु, सोनाली बेन्द्रे र नीलमले सन्देहको लाभमा सफाइ पाएका छन् । पेशीका लागि बुधवार यी सबै अभिनेता ज...
इलामको चिया बगानमा ‘नाई नभन्नु ल ५’ को छायांकन हुँदै
इलाम चैत २२, भदौको पहिलो सातादेखि प्रदर्शन गरिने चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ५’ इलामको चिया बगानमा छायांकन गर्दै कलाकार । फिल्मको सुटिङ झापाको बिर्तामोडबाट सुरु भएको हो । निर्देशक विकास आचार्यको अनुसार बिर्तामोडमा ३ दिन र इलाममा २५ दिन सुटिङ गरी फिल्म युनिट काठमाडौं फर्किएर केही दिन काठमार्डौमा सुट गरिसकेपछि फिल्मको सुट सकिनेछ । प्राय आफ्नो फि...
इन्दिरा र युवराजले गीतमार्फत् दिए आत्मनिर्भरताको सन्देश
बुटवल, चैत अर्घाखा“ची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकामा जन्मिएका नव गायक युवराज भट्टराईको शब्द संगीतमा युवराज भट्टराई र सितगंगागा नगरपालिकामै जन्मिएकी स्वरकी धनी गायिका इन्दिरा गैरैको स्वरमा सजिएको आत्मनिर्भर भन्ने बोलको गितमा सुमन परियार र टिका जैसीले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत गरेका छन् । जुन गितलाई निर्देशन गरेका छन विक्रम चौहानले ग...
काठमाडौं चैत्र २०, कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलार्इ पत्नी शोक परेको छ । सोमबार राति श्रीमती यशोदा सुवेदी (श्रेष्ठ) को क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धिमा निधन भएको हो । विगतमा मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग श्रीमतीको बारेमा गरेको कुराकानी जस्तको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ – श्रीमती जीवनसाथी हुन्, घर हुन्, भर हुन्, डर हुन् । सुखदुःख बिसाउने चौतारी हुन् । श्री...
चर्चित मोडेल शंकर बिसीले गरे प्रहरीमा साइबर क्राइम बिरुद्ध मुद्दा दर्ता , अब को को पुग्छन खोरमा ?
काठमाडौँ चैत्र १९, पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा ब्यापक भाइरल बनाइयको एउटा बिषय हो कलाकार शंकर बिसिको । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा रास्ट्रीय अर्ना दोहोरि रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता भइरहदा उठेको बिबाद त सबैलाई अबगत्नै छ । सोहि भिडियो भाइरल भय लगत्तै शंकरलाइ देश तथा बिदेश बाट ब्यापक गाली आयो धेरैले शंकर बिसिको अ...
२०७४ मा प्रकाशित मन छुने साहित्यिक कृतिको फड्को
काठमाडौँ चैत्र १८, २०७४ मा थुप्रै साहित्यिक कृतिहरु प्रकाशित भए । प्रकाशित भएका धेरैजसो साहित्यिक पुस्तक पाठकको मन छुन सफल रह्यो । चाहे त्यो नारीवादी उपन्यास होस्, चाहे द्वन्द्व सम्बन्धी वा प्रेम सम्बन्धी । विभिन्न प्रकाशकहरुद्वारा प्रकाशित विभिन्न किसिमका पुस्तकले पाठकको मन जित्न सफल भई राम्रो चर्चा बटुलेको छ । फाइन प्रिन्ट प्रकाशनद्वारा २०...
लोकदोहोरी गायिका शर्मिला रायमाझीको नया गीत "गोलि" भिडियो सहित
लोकदोहोरी गायिका शर्मिला रायमाझी र राजु आर डी को स्वरमा रहेको नया गीत "गोलि" गोर्खा चौतारी म्युजिक प्रालि बाट बजारमा आएको छ ।सब्द संगीत पनि शर्मिला रायमाझीकोनै रहेको छ । गीत भिडियो निर्माणको क्रममा सिबन पोख्रेलको निर्देसन अनि मुकेश हुमागाइको क्यामरा बाट तयार भएको भिडियोलाई अधिनायक मान सेरचनले सम्पादन गरेका छन् भने दृस्य निर्माण सहारा फिल्मस एण...
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा जुटदैछु - धुर्मुस
काठमाडौं। ४ वटा नमूना वस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल धुर्मुसले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट निर्माणमा जुट्ने घोषणा गरेका छन् ।नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाएपछि उनीमाथि क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियान अघि बढाउन जनस्तरबाट दवाव बढेको थियो । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ध...
ठूलो बजेटको लगानिबाट बन्दैछ फिल्म ‘भारत’ मुख्य भूमिकामा सलमान र प्रियंका
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खान अहिले फिल्म ‘रेस ३’ को शुटिङमा व्यस्त छन् । यसपछि उनले ‘दबंग ३’ को शुटिङ शुरू गर्ने बताइएको छ । दबंग सिरिजको तेस्रो फिल्मको काम सलमानले यसैवर्षको क्रिसमसको अवसर पारेर रिलीज गर्न सकिने गरी अगाडि बढाईसकेका छन् । त्यसपछि उनले फिल्म ‘भारत’ र ‘किक २’ को शुटिङ शुरू गर्ने मनसाय बनाएका छन् । ‘भारत’ लाई अली अब...
शुरु भयो चौँथो राष्ट्रिय दोहरी गीत प्रतियोगिता : प्रथम पुरस्कार रु.एक लाख ५१ हजार १००
चौँथो राष्ट्रिय दोहरी गीत प्रतियोगिता मंगलबारदेखि भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो प्रतियोगिता यही चैत १७ गतेसम्म जारी रहने छ । प्रतियोगितामा ३५ जिल्लाबाट ४० समूह सहभागी छन् । प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः रु. एक लाख ५१ हजार १००, रु. एकलाख एक हजार १०० र रु. ५७ हजार ७७७ नगदस...
फिल्म‘शत्रु गते’लाई दर्शकले रुचाउनु भएको छ - हरिवंश आचार्य
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले आफूहरुले दर्शकको रुची बुझेको बताएका छन् । लामो समयपछि फिचर फिल्म ‘शत्रु गते’ लिएर आएका उनले दर्शकले चाहे अनुसारको चलचित्र निर्माण गर्न सकेको बताएका हुन् । “फिल्मलाई दर्शकले रुचाउनु भएको छ । यो नै हाम्रो पहिलो सफलता हो । म आफै विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकको प्रतिक्रिया लिँदा शतप्रतिशत पोजेटिभ पाएको छु...
गायक कालीप्रसाद बास्कोटाको नयाँ गीत ’दाइ नभन्नू ल’ भिडियो सहित
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ’दाइ नभन्नू ल’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो गीतबाट नयाँ डान्स ग्रुप नेपाली संगीत उद्योगमा भित्रिएको छ । यसअघि चलचित्र ‘पुरानो डुङ्गा’ को ‘निर’ गीतको कभर गरेर चर्चित भएको र ‘मिस्टर झोले’को गीत ‘ओखती’को कभर भिडियो प्रतियोगितामा प्रथम भएको ‘क्रिष्टल क्लज डान्स ग्रुप’ले ‘द...
यसकारण बोल्न बाध्य भए प्रदीप खड्का र पूजा शर्मा
एजेन्सी : २०७२ सालमा रिलिज भएको चलचित्र ‘प्रेमगीत’बाट नायक प्रदीप खड्का र नायिका पूजा शर्माको निकै चर्चा भयो । जुन चलचित्रबाट नायक प्रदिप खड्का उदाए, त्यस्तै निरन्तर फ्लप फिल्म दिरहेकी नायिका पूजा शर्मा पनि स्टार भईन्, दुई जनाको जोडीलाई दर्शकले एकदमै रुचाए । चलचित्र प्रदर्शन भएसँगै यता दर्शकले ‘प्रेमगीत’लाई रुचाए भने उता चलचित्रको टिम ब...
प्रतिक्षित फिल्म ’शत्रु गते’ शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । फिल्म रिलिज अगाडि नै मल्टिप्लेक्समा धमाधम टिकट बुकिङ भैरहेको छ । सार्वजनिक गीत तथा ट्रेलरको कारण प्रतिक्षित बनेको फिल्मलाई हेर्न दर्शकले चासो देखाएका छन् । फिल्मले मल्टिप्लेक्समा राम्रो शो पाएको छ । फिल्मले क्युएफएक्स च्यानल अन्तर्गतको हलमा २२ शो , बिग मुभिजमा ९ शो , एफक्युबमा ८ शो , ...
कान्तिपुर आइडलको उपाधि उपेन्द्र र सलोनीको हातमा
कान्तिपुर आइडलको उपाधि उपेन्द्र सहयात्री राई र सलोनी मल्लले चुमेका छन् । सनराज इन्टरटेन्ट्मेन्ट प्रा. लि. को आयोजनामा भएको कान्तिपुर आइडल खुल्ला गायन तथा नृत्य प्रतियोगीता उनीहरुले उपाधि चुमेका हुन् । गायन तर्फ फर्स्ट रनरअप समिर खरेल र सेकेन्ड रनरअप अभिषेक पोख्रेल र नृत्य तर्फ फस्ट रनरअप आर्या सुबेदी र सेकेन्ड रनरअप गणेश श्रेष्ठ भएका छन् । चै...
गायक नविन भट्टराईको ‘चाहना एउटै’ बोलको गीत सार्वजनिक
नेपाली संगीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक नविन के भट्टराईको ‘चाहना एउटै’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जेशिका कंडेलको शब्द रहेको गीतमा संगीत नबिन भट्टराईकै छ । यो गीतको संगीत संयोजन मोहित मुनालले गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा छायांकन भएको गीतको भिडियोमा प्रकृति श्रेष्ठ र निर्देशकसमेत रहेका किशोर कंडेलले अभिनय गरेका छन् भने भिडियोलाई प...
धेरै फिल्ममा ‘आमा’को रोलमा देखिन्छिन प्रियंका किन ?
प्रियंका कार्की मिति गुज्रिसकेकी हिरोइन होइनन् । अहिले ३१ वर्षमा हिँडिरहेकी उनीसँगै अझै केही वर्ष हिरोइन बनेर खाने उमेर, सौन्दर्य र फिगर छ । तर हालै ‘नाई नभन्नु ल ५’ मा अर्की नायिका स्वस्तिमा खड्काकी आमाको भूमिका गर्न प्रियंका तयार भएको खबर आयो । यसअघि ‘छक्का पञ्जा-२’ मा पनि उनी स्वस्तिमाकै आमाको रुपमा देखिएकी थिइन् । त्यसो त उनले आफ्न...
सिक्किममा हुदैछ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलन
काठमाडौं । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलन सिक्किममा हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) केन्द्रको र अनेसास सिक्किम च्याप्टरको आयोजनामा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा यही चैत १० र ११ गते भारतको सिक्किममा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो । सम्मेलनकी संयोजक तथा अनेसास...
यहि नयाँ मितीमा नेपाल आउदै छन बलिउड स्टार सलमान खान
काठमाडौं । बलिउड स्टार सलमान खान नेपाल आउने नयाँ मिति तय भएको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चेतावनीपछि स्थगित भएको उनको कार्यक्रम अब मे ५ लाई सरेको छ । दबंग द टुरु नाम दिइएको यो कार्यक्रम मे ५ का लागि पक्का भएको आयोजक ओडिसी इन्टरटेन्मेन्टका सीमान्त गुरुङले जानकारी दिए । टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा अभिनेत्री ...
‘बाघी २’को ‘ओ साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक
एजेन्सी । फिल्म ‘बाघी २’को ‘ओ साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा टाइगर श्रोफ र दिशा पटानीलाई रोमान्टिक मुडमा देख्न सकिन्छ । मार्च ३० मा रिलिज हुने उक्त फिल्मलाई अहमद खानले निर्देशन गरेका हुन् । साजिद नाडीयडवाला निर्माता रहेको फिल्ममा टाइगरसँगै मनोज बाजपाई, रणदीप हुड्डा, दिशा पटानी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । यस फिल्मको पहिलो ...
काठमाडौं फागुन २३, बलिउड तथा हलिउडमा समेत थुप्रै फिल्म खेलिसकेका चर्चित भारतीय अभिनेता इरफान खान एक प्रकारको दुर्लभ मस्तिष्क क्यान्सरको सिकार भएको बताइएको छ । उनी आफैंले ट्विटरमार्फत् केही दिनअगाडि यसबारे जानकारी दिएका थिए । अहिले भने उनी मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा भर्ना भएको बताइएको छ । उनलाई ‘गिब्लोब्लास्टोमा मल्टिफ्रोम’ नामक अत्...
गायक सुगम पोखरेलको ‘ताली ठोकौंला’ सार्वजनिक
झण्डै १४ वर्षको अन्तरालपछि गायक अनिश भण्डारी आफ्नो गायन यात्रामा फर्किएका छन् । गायक सुगम पोखरेलसँगको सहकार्यमा ‘ताली ठोकौंला’ बोलको गीतमार्फत उनी सांगीतिक यात्रामा फर्किएका हुन् । भण्डारीले यसअघि सुगमसँगै मिलेर ‘रंगीन यो साँझ’ तथा सुदिन पोखरेलसँगको सहकार्यमा ‘एउटा सपना’ बोलका गीत ल्याएका थिए । गीतको शब्द तथा संगीत सम्भोज मल्ल र सुग...
यसकारण नआउने भए सलमान खान नेपाल !
काठमाडौं फागुन १९ , बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । खानको ‘दबंग द टुर’ १० मार्चमा काठमाडौंमा हुने तय भएको थियो विप्लव समूहको चेतावनीलाई कारण देखाउँदै सलमानले नेपाल नआउने सन्देश पठाएपछि आयोजक ओडीसी इन्टरनेसनले ‘दबंग द टुर’ रद्द गरेको छ। टुँडिखेलमा हुने शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगाय...
फागुन १७ २०७४ .
काठमाडौँ ,फाल्गुन १७ पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस — फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व बिहीबार हिमाली एवम् पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ । केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो...
यी ७ राशिका लागि होली शुभदिनको संकेत
ज्योतिषाचार्यका अनुसार यो वर्ष होलीमा शनि ग्रहको दुर्लभ संयोग बनेको छ । यो संयोग धेरै समयपछि बनिरहेको छ । भनिएको छ कि होलीको दिन शनि धनु राशिमा हुनेछ । यो भन्दा पहिला यो संयोग १९९० मा बनेको बताइएको छ । यस संयोगले कयौँ राशिका मानिसहरुलाई आउने समयमा लाभ दिलाउने छ । खासगरी यी ७ राशिका व्यक्तिहरुको लागि यसले शुभदिनको संकेत गरेको छ । ती राशिहरु यसप...
गायक आरबी पुन र भगवान भुजेलको ‘साहिँली तिमीलाई...’ सार्वजनिक
काठमाडौं फागुन १४, गायक आरबी पुन र भगवान भुजेलको ‘साहिँली तिमीलाई...’ सार्वजनिक भएको छ । गायकद्वोय कै शब्द, सूर्य दयालुको सङ्गीत रहेको गितको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । गितको भिडियोमा परदेशबाट आउँदाको क्षणलाई चित्रण गर्न खोजिएको गीतको भिडियोमा कलाकार किरण केसी, पुष्प खड्का, कृष्टिना थापा र अनितालाई फिचरिङ गरिएको छ । जीवन शाहीको निर्देशन...
बलिउड अभितेत्री श्रीदेवीको निधन : एकपटक फर्केर सम्झदा
फागुन १३ , अभितेत्री श्रीदेवी अब हामीबीच छैनन् । दुबईमा पारिवारिक वैवाहि समारोहमा सहभागी हुने क्रममा हृदयघातका कारण उनको दुखद निधन भयो ।बलिउडमा पहिलो फिमेल सुपरस्टारका रुपमा उदाएकी श्रीदेवी आफ्नो नृत्य, अभिनय तथा चुलबुलेपनले गर्दा नै छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भइन् । यसै खुबीका कारण उनले सन् २०१२ मा ‘इंग्लिश विंग्लिश’ मार्फत धमाकेदार रुपमा...
चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको दुबईमा निधन,लाखौं फ्यान सोकमा
फागुन १३ २०७४ .
नयाँ दिल्ली,फागुन १३ (एजेन्सी)– हिन्दी फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको शनिबार राती हद्यघातका कारण निधन भएको छ। ५४ वर्षीय श्रीदेवी आफ्नो नन्दको छोराको विवाह कार्यक्रममा समावेश हुन दुबई गएकी थिइन्। त्यही उनको निधन भएको हो। उनको निधनले बलिउड र विश्वभरि रहेका उनका लाखौं फ्यान सोकमा डुबेका छन्। उनको निधनको खबरलाई लिएर सोसल मिडियामा आश्चर...
पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम अभिनित गीत 'कान्छा दाई गाना बजाइदेउन' सार्वजनिक (भिडियो सहित )
पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम अभिनित चलचित्र अनुरागको गीत सार्वजनिक भएको छ । कान्छा दाई गाना बजाइदेउन... बोलको डान्सिङ गितमा एलिजा र सरोज अधिकारी छन । तराप्रकाश लिम्बुको संगीत रहेको गीतमा ममता गुरुङको शव्द, ताराप्रकाश र ममताको स्वर र विक्रम स्वारको कोरियोग्राफि रहेको छ । गीत सार्वजनिकसँगै ‘अनुराग’को रिलिज मिति पनि तय गरिएको छ । सत्...
चलचित्र ‘सुनेकसरी’को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौं फागुन ५, चलचित्र ‘सुनेकसरी’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । अस्ट्रेलियामा सम्पूर्ण छायांक गरिएको चलचित्रको टिजर सार्वजनिक गरिएको हो । टिजरमा अभिनेत्री ऋचा शर्मा र कलाकार रविन्द्र झा फिचर छन् । हरर जर्नराको चलचित्र ‘सुनेकसरी’ अभिनेत्री ऋचा शर्माको लगानी र अभिनेता अर्पण थापाको निर्देशनमा निर्माण भएको हो । जेठ ११ गते रिलिज हुने चलचित्...
आँखा झिम्क्याएरै चर्चाको शिखरमा पुगिन् प्रिया
एक किशोरलाई आँखा झिम्क्याएको २६ सेकेण्डको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएपछि केरलाकी एक युवति चर्चाको शिखरमा पुगिन् । देशभर उनका प्रशंसक बढेको बढ्यै छन् । यो भिडियोले सर्वाधिक चर्चा पाएपछि धेरैलाई अहिले यो भिडियो बनाउन कति समय लागेको थियो भन्ने जिज्ञासा समेत सुरु भएको छ । भिडियोमा देखिएकी युवति प्रिया प्रकाशका अनुसार निर्देशकले सुटिङ स्पटमै यो ...
काठमाडौं फागुन २, १४ फेब्रुअरीलाई प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डेका रूपमा विश्वभर मनाइन्छ । यस दिन युगल जोडीले आफ्नो मनको कुरा खुलेर एक–अर्कालाई सुनाउँछन् । फूल, गिफ्ट दिन्छन् र सेलेब्रेसन गर्छन् । प्रेम जोडीले उत्सवका रूपमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउँछन् । खासमा यो दिवस सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ । यसको इतिहास खोतल्...
दिपु न्यौपानेको रोमान्टिक गीत ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’
प्रेम दिवस नजिकिंदै गर्दा दिपु न्यौपानेले रोमान्टिक गीत ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’ गीत ल्याएका छन् । सङस् नेपालको यूट्यूव मार्फत ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’ सार्वजनिक गरिएको छ ।दिपुकै स्वर तथा सुनिल थापाको म्यूजिक रहेको उक्त गीतको एरेन्जर फडिन्द्र राई छन् । अमृत केसी र स्नेहा शर्माको फिचरिङरहेको गीतको सहायक निर्देशकमा पनि अमृत केसी नै छन् । श्रीराज ईन्...
कविता - "कोपिला"
माघ २८ २०७४ रीता काफ्ले
"कोपिला" काडाँको बिचमा मुस्कुराउने गर्छु म , चारैतिर मेरै चर्चा गरेको देख्छु । गुम्सिएका हुन्छन् अथाहा पिडाहरु के थाहाँ हेर्नेलाई ,कति दु:ख खेप्छु ।। लुकेको त्यो सुवास छर्छु जताततै सुगन्धले अवश्य मग्न बन्नेछौ तिमी । आज पनि कदम चालिरहेकी छु अभाव र सङघर्षलाइ बनाई सङगिनी ।। जिउन त मैले कहाँ जानेक...
'कान्छी सुपर नाइट'मा स्वेताले दिइन गायक शिवाकोटीलाई मोटरसाइकल उपहार
काठमाडौं माघ २४, दर्शक तथा स्रोताले मन पराउने गीत सिर्जना गरेको भन्दै चलचित्र ‘कान्छी’ को निर्माण युनिटले गीतकार, संगीतकार तथा गायक राजनराज शिवाकोटीलाई मोटरसाइकल उपहार दिएको छ । चलचित्र ‘कान्छी’ को ‘चरी चट्ट परी भुरुरु...’ बोलको गीतले युट्युबमा एक करोडधन्दा धेरै भ्युज प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा ‘कान्छी’ को निर्माण युनिटले मंगलबार साँझ...
डान्स गर्न अस्वीकार गरेपछि : चर्चित अभिनेत्री सुमबुल खानको गोली हानी हत्या
पाकिस्तानकी चर्चित अभिनेत्री तथा गायिका सुमबुल खानको हत्या भएको छ। धनीहरूको पार्टीमा डान्स गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको गोली हानेर हत्या भएको हो। यो घटना पाकिस्तानको मर्दन शहरमा भएको थियो। बेलायतबाट प्रकाशित हुने इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले पाकिस्तानको स्थानीय पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रिब्युन पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। सुमबुलल...
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्, यद्यपि त्यो आकर्षण प्रेमका कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आकर्षणको अवस्थामा पुगेको...
चर्चित हाँस्यटेलिश्रृखला‘भद्रगोल’बन्द होला त ? यस्तो भन्छन ‘पाँडे’
चर्चित हाँस्यटेलिश्रृखला ‘भद्रगोल’ अब बन्द भएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक साता प्रसार हँुदै आएको यो श्रृखला यो साताबाट प्रसारण नहुने भएको छ । ‘भद्रगोल’ बन्द भएको जानकारी श्रृखलाका निर्देशक मध्यका एक अजुर्न घिमिरे ‘पाँडे’ले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएका छन् । घिमिरेले श्रृखलासम्बन्धी एक लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै दर्शकले अब ‘भद्रगोल...
‘कान्छी म्यूजिकल नाइट २०१८’ होटल अन्नपूर्णमा
काठमाडौं माघ २१ , यहि माघ २३ गते काठमाण्डौको अन्नपूर्ण होटलमा ‘कान्छी म्यूजिकल नाइट २०१८’को आयोजना हुने भएको छ । यो कार्यक्रममा चलचित्र ‘कान्छी’ टिमसँगै नेपाली चलचित्र र सांगीतिक क्षेत्रका दर्जन बढी कलाकारको सहभागीता रहनेछ । नायिका स्वेता खड्काले भनिन्–‘हामीले चलचित्र र सांगीतिक क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरुलाई निम्ता गरेका छौ । आशा छ, हाम्रो निमन्त...
नेपालमा पनि बलिउड फिल्मको छायांकन :फिल्मको मुख्य भुमिकामा दीपिका र इरफान
माघ २० , बलिउडमा अत्यन्तै चर्चित र सफल मानिएकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत बहुप्रतिक्षीत फिल्म पद्मावत अहिले सफलतापूर्वक प्रदर्शन भइरहेको छ ।यो फिल्म २०१८ मार्च ५ बाट नेपालमा छायांकन सुरु गरिने छ । नेपाल छायांकनका लागि फिल्म यूनिटले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । विशाल भारद्वाजले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्ममा पिकुु अभिनेत्री दीपिका र ...
पद्मावतका विषयमा शाहिद कपूर र रणवीर सिंहबीच विवाद
काठमाडौं माघ १९, पद्मावतमा शाहिद कपूरभन्दा बढी रणवीर सिंहको भूमिकाको चर्चा चलिरहेको छ । शाहिद कपूरलाई यो पचाउन गाह्रो भइरहेको छ । उनी अलाउद्दीन खिलजीको भूमिका रणवीरले भन्दा फरक तरिकाले गर्न सक्ने बताइरहेका छन् । शाहिदलाई पत्रकारले खिलजीको भूमिका गर्न चाहनुभएको थियो भनी सोध्दा उनले भने, ‘अवश्य । सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्ममा यस्तो भूम...